Arison Vonjy – « gasyTsara »: rakikira feno fihetseham-po, mizara fitiavana | NewsMada
Arison Vonjy – « gasyTsara »: rakikira feno fihetseham-po, mizara fitiavana
Par Taratra sur 14/03/2019
« gasyTsara ». Io ny lohatenin’ny rakikira vaovao, atolotr’i Arison Vonjy ho an’ny mpankafy. Misy hira 11 ao anatiny, izay iarahany amin’ny mpitendry telo mirahalahy, samy tsy zovina amin’ny maro intsony : i Dovs (vatamaroafitsoka), i Nali (ampongamaroanaka) ary i Harti (gitara beso).
Ity rakikira ity ny fehin’ilay fampisehoana notanterahin’ny tarika, ny volana novambra 2017, teny amin’ny American Center eny Tanjombato. Araka izany, “live” izy ity, saingy natonta hanaraka ny fenitra mendrika ny sofin’ny mpankafy, tany ivelany tany mihitsy.
Efa ampolo taona maro ny nahafantaran’ny mpankafy mozika an’i Arison Vonjy, niainga teo amin’ny tontolon’ny jazz ary miavaka amin’ny feo manga sy matanjaka. Nomarihiny tamin’ny rakikira, mitondra ny lohateny hoe « Feno loatra », izay niarahany tamin’i Tôty sy mpitendry mozika jazz maromaro, izany fotoana izany, ny taona 2004.
Miaina tanteraka ao anatin’ny mozika ny lehilahy ary mifanerasera sy mifanakalo traikefa amin’ny mpamoron-kira, ny mpitendry, ny mpandrindra ary ny mpihira maro. Tsy mitsahatra mitrandraka sy mikaroka ihany koa hampipaka tanteraka ny avy ao am-pony any amin’ny mpihaino.
Tao anatin’izany ny nahaterahan’ny « VO », rakikira faharoan’i Arison Vonjy. « Maneno gasy kokoa ny mozika ao anatin’io rakikira, niarahana amin’i Silo Andrianandraina, io », hoy ny fanazavany. Ny taona 2015, nipoitra tao anatiny ny faniriana hamoaka hira mampifamaly kokoa ny fitiavana sy ny fahatsapana eo amin’ny tarika sy ny mpankafy na ny mpihaino mozika. Mirona kokoa amin’ny « funk » ny mozika ao anatin’ity vokatra vaovao ity, saingy tsy very koa ny famoronana mifototra amin’ny maha Malagasy.
Mitantara fitiavana, amin’ny lafiny rehetra, ny « gasyTsara », izay anatosahan’i Arison Vonjy ny firaiketany amin’ity tanindrazana iombonana ity sy ny olombelona ary ny zavamananaina rehetra ao aminy. Hosantarina, etsy amin’ny IFM ny 5 avrily izao, ny fampahafantarana ny rakikira. Hanomboka amin’io koa ny « gasyTsara tour », manerana ny faritra maro.